Serasera sy haino aman-jery “Mila lalan-tsaina filozofika fa tsy lalàna fotsiny”
Fanaovana kolikoly Miandry kely aloha ny fanenjehana ireo minisitra
Noho ny tsy fisian’ny HCJ (Haute Cour de Justice) no tsy nahafahana nanohy ny famotorana ireo minisitra teo aloha tafiditra amin’ny raharaha kolikoly.
Manamboninahitra mitazona fibaikoana « Handraisana fepetra izay tsy nahatontosa ny asany »
Teboka valo no nanaovana tomban’ezaka an`ireo manambonihaitra mitazona fibaikoana eo anivon`ny zandarimariam-pirenena izay niainga tamin`ny tondrozotra nomena.
Fahitalavitra nomerika Maro ny tolotra saingy….
Betsaka ireo tolotra misy mba hisitraka fahitalavitra nomerika ny Malagasy.
Vono olona teny Imerintsiatosika Miteraka alahelo goavana ilay didim-pitsarana
Niteraka fanehoan-kevitra maro ilay didim-pitsarana nivoaka tao Arivonimamo momba ilay raharaha famonoana olona 3 mianaka, dia mpivady vao erotrerony sy ny zanany vavikely ny faran’ny volana aogositra 2018. Malahelo mafy aho, hoy i Mika.
Ady amin`ny kolikoly Hiara-kiasa akaiky kokoa amin’i Madagasikara ny Afrikanina
Rafitra roa nahazo fahefana avy amin’ny Vondrona Afrikana hanatanteraka ireo hetsika hisorohana sy hiadiana amin’ny kolikoly ny Filankevitra miandraikitra ny ady amin’ny kolikoly eo anivon’ny Vondrona Afrikana (CCUAC) sy ny fikambanan’ireo fahefana avo miady amin’ny kolikoly aty Afrika (AAACA).
Fitrandrahana fasimainty Mampiahiahy ny fanjakana ny QMM
Misy mampiahiahy ve ny fitrandrahana ataon’ny orinasa QMM ao Tolagnaro sa inona no tena tian’ny fanjakana hahatongavana ?
Isaorana ny tao anatin’ny minisitera nanana finiavana nitondra fanavaozana.
Ny minisitra Lalatiana Rakotondrazafy rahateo, dia anisan’ny niaraka teny an-kianja tamin’ny fitakiana ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety, hoy ny mpanao gazety Jesy Rabelaolao manoloana ny fampahafantarana ny volavolan-dalàna mikasika ny lalàna mifehy ny serasera omaly. Tsotra ny azy ny heviny : rehefa avy mandinika sy mamakafaka vao tena haneho ny heviny na mety io na tsy mety. Efa zokinjokiny ihany aho raha ny asa fanaovan-gazety no resahina satria 40 taona no naha mpanao gazety ary hatramin’izay ka hatramin’izao dia ao anatiny foana, ary efa im-balo voasambotra, hoy izy. Nisy zavatra betsaka niainana teto, ka indraindray voantso tamin’ny fananganana ny fehezan-dalàna mikasika ny asa fanaovan-gazety, ary indraindray tsy voaasa mihitsy. Tamin’ity aho dia tsy nahalala mihitsy ka handinika aloha, hoy izy. Aza adinoina fa samy hafa ny asa amin’ny maha ianao any anaty fitondram-panjakana sy ianao am-perinasa amin’ny fanaovan-gazety, hoy ny fanamarihana nataony. Notsiahiviny rahateo, fa betsaka izay volavolan-dalàna izay satria miaina ny lalàna. Misy rahateo ny lalàna fa ao ihany koa ny sehatra sy ny lalan-tsaina filozofika, hoy izy.